iPhone Archives | Page2of 11 | Pyae Heinn Kyaw's Blog
မနက်ဖြန်ညမိတ်ဆက်မယ့် iPhone 12 Series အကြောင်းသိထားရသမျှ သတင်းအစုံအလင်
AirPods, Apple, iPhone, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ .. iPhone 12 Series ကတော့ မနက်ဖြန်ည (၁၃ ရက်နေ့ည ၁၁:၃၀) မှာ မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် .. အဲ့ဒီ event မှာ မိတ်ဆက်လာမယ့် iPhone တွေအကြောင်းကို Twitter Leaker တွေနဲ့ Everything Apple Pro တို့က အမြဲတမ်းဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောထားသမျှကို စုစည်းပြီး ဒီ Post မှာပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနှစ်မှာ iPhone Model4မျိုးထိထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 12 Mini (5.4-inch) iPhone 12 (6.1-inch) iPhone 12 Pro (6.1-inch) iPhone 12 Pro Max (6.7-inch) …
မနက်ဖြန်ညမိတ်ဆက်မယ့် iPhone 12 Series အကြောင်းသိထားရသမျှ သတင်းအစုံအလင် Read More »
Apple, Apple Watch, iPad, iPhone, MacBook, macOS, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ဒီနေ့သတင်းကတော့ ထူးခြားပါတယ် .. လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်က Reddit မှာ AppleSeeder2020 ဆိုတဲ့ Username နဲ့လူတယောက်ဟာ Apple နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေတော်တော်များများကို Leak လုပ်ခဲ့ပါတယ် … Reddit မှာ အမေးအဖြေသဘောမျိုးနဲ့ တခြားလူတွေမေးတဲ့အရာတွေကိုပြန်ဖြေပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ သူဟာ Apple က ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ် .. သူဟာ Apple ကဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ Reddit Moderator တွေကို သက်သေပြခဲ့တာဖြစ်လို့ အဆိုပါလူဟာ အတိုင်းအတာတခုထိယုံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် ဒီနှစ်မှာ iPhone 12 အကြောင်း, iPad အကြောင်း, မျက်မှန်အကြောင်း စသဖြင့် Apple နဲ့ဆိုင်နဲ့ သတင်းတွေ ပွထနေအောင် ထွက်နေတာကို အားလုံးပဲသတိထားမိမှာပါ .. AppleSeeder2020 ပြောကြားပုံအရ …
iPhone 12 နဲ့ Apple ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဥ်တွေအကုန်လုံးကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ Apple ဝန်ထမ်းတဦး Read More »
iPhone အတု အလုံးရေ 1000 ကျော်ကို AppleCare+ အသုံးပြုပြီး အစစ်တွေနဲ့လဲလှယ်ခဲ့တဲ့ သားအမိကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
UNICODE iPhone အစစ်တွေနဲ့ လုံးဝတူညီတဲ့ iPhone အတုအလုံးရေ 1,000 ကျော်ကို AppleCare+ အသုံးပြုပြီး Warranty Claim ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဥ်ဟာ ဟောင်ကောင်နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် တရားခံကတော့ တရုတ်လူမျိုး သားအမိ2ယောက်ဖြစ်ပြီး သားဖြစ်သူက ထောင်ဒဏ်4နှစ်ကျခံရမယ့်အပြင် သူကိုယ်တိုင် နှစ် 20 ကျော်နေထိုင်လာတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကနေ ပြည်နှင်ဒဏ်ပါ အပေးခံလိုက်ရတာပါ Apple ကိုလှည့်စားခဲ့တဲ့နည်းလမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် .. အရင်တခေါက်ကလဲ တရုတ်ကျောင်းသား2ယောက်ဟာ ဒီလိုလှည့်စားပြီး $1 သန်းကျော်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ iPhone တွေလိမ်လည်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဥ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် Apple ဟာ AppleCare+ မဝယ်ထားတဲ့ iPhone တွေကို Water Damage အတွက် Warranty မပေးပါဘူး …
iPhone အတု အလုံးရေ 1000 ကျော်ကို AppleCare+ အသုံးပြုပြီး အစစ်တွေနဲ့လဲလှယ်ခဲ့တဲ့ သားအမိကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ် Read More »
iPhone Latest Model တွေမှာ သုံးပေးထားတဲ့ A13 Bionic Chip ကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ခြင်း
UNICODE Apple ဟာ သူ့ Product တွေရဲ့ Hardware, Software မှန်သမျှကို တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်တိုင် Design ဆွဲပြီးထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့ Apple Product တွေဟာ Hardware/Software Compatibility ပိုင်းမှာ နာမည်ကျော်ကြားပါတယ် .. ဒီနေ့မှာ ပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ A13 Bionic Chip အကြောင်းကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် A13 Bionic Chip ဆိုတာကတော့ Apple ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် SoC (System on Chip) ဖြစ်ပြီးတော့ iPhone 11 Series နဲ့ iPhone SE 2020 မှာ အသုံးပြုပေးထားတဲ့ Chipset ပဲဖြစ်ပါတယ် SoC ဆိုတာ …
iPhone Latest Model တွေမှာ သုံးပေးထားတဲ့ A13 Bionic Chip ကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ခြင်း Read More »
iPhone တွေရဲ့ Face ID စနစ်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ? Face ID က စိတ်ချရရဲ့လား?
Apple, iPad, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အခုပြောပြပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Face ID အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းနဲ့ Face ID ကဘယ်လောက်ထိ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုတာပါပဲ Apple က 2017 September Event မှာ iPhone X ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ iPhone X ဟာ Face ID စနစ်ကို ပထမဆုံး စတင်အသုံးပြုတဲ့ iPhone ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် .. Android တွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက Facial Unlock စနစ်တွေ ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Apple က 2017 ကမှ ဒီစနစ်ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ လူတော်တော်များများက ဝိုင်းလှောင်ခဲ့ကြတာကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ ဒါပေမယ့် Android တွေရဲ့ Facial Recognition နဲ့ Apple ရဲ့ …
iPhone တွေရဲ့ Face ID စနစ်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ? Face ID က စိတ်ချရရဲ့လား? Read More »
iPhone တွေနဲ့ မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ Battery Health ပြဿနာ
Apple, iOS, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ကျွန်တော်တို့ Facebook Group ထဲမှာ အမေးအများဆုံးနဲ့ ပြဿနာအများဆုံး Topic ကတော့ Battery Health အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် .. ahh here we go !! I’m tired of this s***t 😅 ပထမဆုံးသိထားရမှာက Battery Health ဆိုတာ သုံးလေကျလေပါပဲ .. Battery အသစ်စက်စက်မှာတုန်းကပါလာတဲ့ mAh amount ဟာ သုံးတာကြာလာတာနဲ့အမျှ လျော့လျော့လာတတ်ပါတယ် .. Battery Health ဆိုတာ လက်ရှိ Battery ရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ mAh amount ဟာ Battery အသစ်စက်စက်မှာပါလာတုန်းက mAh amount ရဲ့ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာကို …
iPhone တွေနဲ့ မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ Battery Health ပြဿနာ Read More »
iPhone 12 မှာ နားကျပ်ကိုထည့်သွင်းပေးတော့မှာမဟုတ်တော့တဲ့ Apple
AirPods, Apple, iPhone / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE May လတုန်းက Apple Analyst ဖြစ်တဲ့ Ming-Chi Kuo က Apple အနေနဲ့ iPhone 12 တွေမှာ EarPods တွေကိုထည့်သွင်းပေးတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် .. Ming-Chi Kuo ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေက ဘယ်လောက်ထိတိကျလဲဆိုတာ Tech သတင်းတွေဖတ်နေကျလူတွေသိမှာပါ EarPods ဆိုတာ iPhone ဝယ်ရင် ဗူးခွံထဲမှာတပါတည်း ပါဝင်လာတဲ့ နားကျပ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် .. သူများတွေက Earphone လို့ခေါ်ပေမယ့် Apple ကတော့ EarPods လို့ခေါ်ပါတယ် .. AirPods နဲ့မှားနေမှာစိုးလို့ ကြိုပြီးရှင်းပြထားတာပါ အခုအခါမှာလဲ Wedbush က Analyst တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dan Ives ကလဲ Ming-Chi Kuo …
iPhone 12 မှာ နားကျပ်ကိုထည့်သွင်းပေးတော့မှာမဟုတ်တော့တဲ့ Apple Read More »
UNICODE Research firm တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Omdia အဆိုအရ 2020 ပထမ3လအတွင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းဟာ iPhone 11 လို့ဆိုပါတယ် .. 2020 Q1 ရဲ့ Popular အဖြစ်ဆုံး Smartphone 10 လုံးစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ Apple ရဲ့ iPhone4လုံး, Samsung ရဲ့ Galaxy4လုံးနဲ့ Redmi ရဲ့ Redmi Note Series2လုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ် နံပါတ် 1 နေရာမှာ iPhone 11 က အလုံးရေ 19.5 သန်းတင်ပို့ထားတဲ့စံချိန်နဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယနေရာက Galaxy A51 (အလုံးရေ 6.8 သန်း …
2020 Q1 မှာ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ iPhone 11 Read More »
iPhone 12 နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုချိန်ထိ သိထားရသမျှအကြောင်းအရာများနဲ့ စျေးနှုန်းများ
UNICODE ကဲ အားလုံးပဲ အသစ်ထွက်မယ့် iPhone 12 ကိုရင်ခုန်နေကြပြီထင်ပါတယ် .. အခု Article မှာတော့ iPhone 12 အကြောင်းထွက်ရှိထားသမျှ Rumors တွေကို ကျွန်တော်သိသလောက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် .. တခုသတိပြုရမှာက အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေဟာ Apple က အတည်ပြုထားတာ တခုမှမပါလို့ 100% မှန်ချင်မှမှန်ပါလိမ့်မယ် .. သို့ပေမယ့် Apple နဲ့ပတ်သက်ရင် ခန့်မှန်းချက်တိုင်းမှန်တတ်တဲ့ Jon Prosser နဲ့ Ming-Chi Kuo တို့လို နာမည်ကြီး Leaker တွေကပြောတာတွေကို ပြန်လည်စုဆောင်းပေးထားတာဖြစ်လို့ အနည်းနဲ့အများတော့ မှန်မှာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိ iPhone 12 လို့ခေါ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ iPhone တွေကို Apple အနေနဲ့ COVID-19 Crisis ကြောင့် …
iPhone 12 နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုချိန်ထိ သိထားရသမျှအကြောင်းအရာများနဲ့ စျေးနှုန်းများ Read More »
လူတော်တော်များများမသိသေးတဲ့ iPhone ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်မယ့် Tips & Trick 28 ခု (Final Part)
UNICODE 🚨 ဒီ Article ကို Copy ကူးချင်ရင် PHK Knowledge Sharing ကို Credit ပေးကြပါခင်ဗျာ 🚨 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ .. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ iPhone တွေကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုရာမှာ အထောက်အကူပေးတဲ့ Tips & Tricks 28 ခုကို Sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီ Article မှာ နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ Tips & Tricks7ခုကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Part 1 ကို ဒီ Link မှာသွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/iphone-tips-and-tricks-first-part/ Part2ကို ဒီ Link မှာသွားရောက် …
လူတော်တော်များများမသိသေးတဲ့ iPhone ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်မယ့် Tips & Trick 28 ခု (Final Part) Read More »
သင်သွားသမျှ နေရာတိုင်းကိုသိနေတဲ့ Facebook ရဲ့ Location Tracking အကြောင်းနဲ့ အဆိုပါ Location History ကိုဖျက်နည်း